Lena isici esiphawula ama-Japan Mount Fuji. Photo of ingalali stratovolcano ukuhlobisa zonke izincwajana izivakashi ngezwe. Intaba uzungezwe nge izinganekwane kanye izinganekwane ezihlatshelelwa izimbongi ayethunjwe imidwebo ngabaculi abadumile. Yini eletha inkazimulo enjengeyendodana Fujiyama? Mhlawumbe yokuthi kuba intaba ephakeme kunazo zonke e-Japan? Cishe, kulesi simo waba nendima yomlando sentaba, hhayi imingcele womhlaba. Ngo umbono Fuji-Japanese ekude kakhulu isithombe wangempela wakhe. Ngisho nomuntu ofundile uyaqiniseka ukuthi emathunjini intaba-mlilo eyayihlala umphefumulo bakhanyiselwa. Ngakho-ke, intaba-Japanese ngokuthi ngenhlonipho - Fuji-san. uhlaka layo ukwakha Isigaxa cishe ephelele. Kutholwe esiqongweni lobuShinto. Futhi ngasesinqeni engakhuli wasenganekwaneni kancane "Ihlathi omuntu okuzibulala." Ake sizame ukuhlukanisa iqiniso kweqanjiwe bese unquma ukuthi iziphi iyisici - Mount Fuji.
amaqiniso Dry yesayensi
Njengoba sekuphawuliwe, Fuji iphuzu kakhulu lonke leli qoqo leziqhingi Japanese, futhi kanye stratovolcano zamanje. Kutholwe emajukujukwini esiqhingi Honshu, e amakhilomitha onomzali engamakhulu sisuka eTokyo. Ngezinsuku ecacile, kusuka inhloko-dolobha yaseJapane ngisho kungabonakala eningizimu-ntshonalanga okukhulu kokukhanya ice entabeni ezimatasa. Fuji ukuphakama 3776 amamitha ngaphezu kolwandle. It kungokwalabo le intabamlilo Ukhahlamba Alps Japanese. Wayeseqamba igama lakhe ngokuthi ezintathu ugema Ezweni YeJapan eyiNgisi Vilyam Gouland. Wanyathelisa lencwadzi baseYurophu 'Guide eJapane ", okuyinto wafanisa emithambekeni emaweni yezintaba wendawo ezilele alpine. Nokho, amaJapane Mount Fuji akuyona ngempela intabamlilo efile. Isikhathi sokugcina ke kwaqubuka 1708, futhi inamandla ngempela. Khona-ke kuqala Edo (manje Tokyo) kuhlinzwa ungqimba umlotha wentaba-mlilo cishe 15 amasentimitha e ukujiya. Ngalesi kuqhuma kanye wentaba uvele Hawayo-zan, uye ngandlela-thile wahlanekezela uhlaka esiphelele Mount Fuji.
Ososayensi ukuhlukanisa phakathi ubudala futhi entsha Mount Fuji. Waqale kumiswa elinye ayizinkulungwane engama-80. Wayengumuntu okhuthele. Futhi eminyakeni eyizinkulungwane 20 edlule, kube nephutha eqinile futhi yesikhathi eside (eminyaka) kuqhuma. Ngenxa yalokho, it uyonquma ukusakaza lava futhi kwakhiwa enhle "Fuji Five Lakes" kanye intabamlilo ubudala uye zigoqiwe ngokuphelele. New eqala ukukhuluphala eminyakeni eyizinkulungwane 11 edlule. umsebenzi wayo waqala ukuba alobe emibhalweni yaminyaka yonke iminyaka 781. Kusukela ngaleso sikhathi, kwakunabamemezeli abangu-12 nokuqhuma. Umhlangano omkhulu kunayo yonke, kulandele ukukhululwa kwe-lava basaltic babonakala ku 800-m, 864 futhi 1708. Mount Fuji eJapane futhi manje awalulahlanga umsebenzi, futhi nje elele. Iqiniso lokuthi kusenzima intabamlilo, libonisa iziphethu eziningi ezishisayo. Kodwa wentaba (amamitha 500 ububanzi futhi 200 m ukujula) manje endaweni ephephile ngokuphelele.
Fuji e isiko Japanese
Stratovolcano kwaba amakhulu eminyaka ukuthi isihloko esithandwayo wendabuko art. Lokhu, ngaphezu kwakho konke, nomthelela ngamasiko asendulo nama-legends. Kukholakala ukuthi esiqongweni sentaba emgodini wentaba amadoda bukhoma Taoist ukukhanyiselwa. Sawo awuthunqise phezu kwentaba-mlilo - ke ukwenziwa isiphuzo ukungafi. Izimbongi abaculi ukuchaza Fuji-san intaba, phezulu lapho kubophezeleke yiqhwa okuphakade. Nokho, eqinisweni, ngo-July nango-August iqhwa ngokuphelele yehla. On Xylographs ekukhuphukeni ukumela ngokuzumayo kakhulu futhi emaweni, bayichezukisa at 45 degrees. Kukholakala ukuthi abambalwa abakhethiwe ungathola kuya phezulu. Ngakho, ngokusho legend, kuba emqansweni wenza Prince Sogoku. Nokho, izinhlobo Mount Fuji, wathwebula ngezindlela ezihlukahlukene, sibonise emithambekeni sasivumela emnene. Naphezu kweqiniso lokuthi le ntaba-mlilo isiqhume ngokuphindaphindiwe zobuciko akuyona isithombe olulodwa emelela Mount Fuji ayaluzayo. Mhlawumbe ngoba eJapane ukukhombisa imizwa yabo, ngisho intabamlilo prohibitively.
Mount Fuji eJapane waziwa ngaphandle kwezwe ngenxa yokuqoshwa kwesikhathi Edo. Xylographie Hokusai futhi Hiroshige esibonisa vertex magic ekuphumeni phezulu ngaphezu ungqimba lwamafu, umcabango linqotshiwe baseYurophu. Minyaka yonke, umqansa isiqongo abantu mayelana amabili likhulu lamawaka. Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi ekhuphuka uvunyelwe izinyanga ezimbili kuphela - kusuka July 1 kuya ekupheleni kuka-August. Kodwa izivakashi uhambo - hhayi abahlinzeki eyinhloko izivakashi wentaba intaba-mlilo. Ingxenye abagogobeleyo phakathi labo uya entabeni,% 30 nje. Nokho, injongo eyinhloko ukhulisa kuya phezulu - olungcwele oluya zenkolo. Phezulu Mount Fuji, ngakwesokudla onqenqemeni wentaba-mlilo, elise Sengen Jinja lobuShinto. Iqembu izindela ukwenza ababikezeli bezulu, esiteshini eliseduze, futhi ... abasebenzi yeposi. Thumela izihlobo iposikhadi ngokuqondile esiqongweni sentaba engcwele - kungcono eJapane kubhekwa ziwuphawu oluhle.
Ngo-June 2013 Fuji kwahlanganiswa UNESCO uhlu. Kuyaphawuleka ukuthi wangena kulolu hlu akuyona yinhlonipho njengenhlangano Isenzakalo esingokwemvelo ezithakazelisayo, kodwa njengoba into nakumasiko. Kuyinto inkokhiso yokuthi sekungamakhulu eminyaka le ntaba-mlilo ephefumulelwe abaculi kanye izimbongi ukusebenza. Ngakho-ke uhlu olusemthethweni UNESCO iyona "Mount Fuji. Kuvele mthombo ongashi ugqozi futhi into yokukhulekela. " Ngaphezu kwalokho, intaba-mlilo futhi ezizungezile kufakwe Fuji-Hakone-Izu - epaki kaZwelonke. A amachibi emihlanu - Sai Sodzin, Motosu, Yamanaka futhi Kawaguchi - Uyi resort, lapho izakhamuzi bathanda uphumule Tokyo.
Isizini ukuvulelwa ayehamba phezu emithambekeni ye entabeni baningi zokutakula izikhungo, izitolo kanye yamagoya - izivakashi indawo yokuhlala, lapho ungakwazi yokulala. Fuji ihlukaniswe yaba amazinga eziyishumi (ngokuthwebula Gome). Owesihlanu engafinyelelwa ngebhasi, nakuba zikhona izindlela ezisemthethweni ngokuqondile unyawo intaba-mlilo. Inani elikhulu yamagoya, zokudlela kanye nezinye izingqalasizinda izivakashi is baphawula phezu emthambekeni osenyakatho. Endleleni uzothola nezindlu zangasese Composting. Baze ukufuthelana ngu-solar panel yangasese esihlalweni (kungcono Japan!). Fuji kudinga umzamo omkhulu ngokufaka abanqobi ka vertices. amahora ayisishiyagalombili ukuthi siphakamise futhi ezinhlanu - ukwehla, futhi lokho singabali kunini lapho okuma nobusuku. Futhi uma wenza emqansweni kusuka ezingeni lesihlanu, ungathola kude futhi omunye usuku ukukhanya: lesithathu phezulu naphansi ezimbili.
I kunesidingo sokuqapha
Budebuduze isiqongo kungabonwa lama glider. izindiza ezinjengalezi isimiso kuyingozi ngoba Mount Fuji "edumile" gusty imimoya futhi inkungu. Futhi, ezinye izivakashi ukuthatha ithrekhi ububanzi ehola ngomqanso ngoba zezindlela zokuqwala izintaba. Eqinisweni, lezi emithambekeni esiyingozi zenzelwe ogandaganda, okuyinto zilethe yamagoya umphako elahliwe phansi izivakashi olimele. Ukuya emgwaqeni, naphezu neqondile okusobala umzila, kuyingozi. Wayengakwazi ukukhulelwa iphuma, namatshe kungamlimaza umuntu hhayi kuwe kuphela, kodwa futhi abahamba phezu nokuhamba emizileni abahambi. Baphonse udoti zonke komzila sinqatshiwe. I izitolo emithambekeni ngeke adayise amanzi kuphela, esenana i ibhodlela angenalutho.
Kungani phindela phezulu intabamlilo
Naphezu kweqiniso lokuthi ungakwazi ukugibela wehle ukusuka phezulu Mount Fuji emhlanganweni wezinsuku ukukhanya, izivakashi eziningi zithanda ukuchitha ebusuku yeshumi, kakhulu phezulu, esiteshini, eqhugwaneni elincane. Yini le ebenza sikhuthazele amakhaza kanye yokudlela eduze kwesithando somlilo uwoyela ukhari noodle (kathathu ngaphezulu kuyabiza kuka e yokudlela phansi)? Iqiniso lokuthi Mount Fuji idume nokushona yayo. Futhi ngenxa yokuthi bonke izivakashi ngehora lesine ekuseni ushiye izikhwama zokulala kanye amathoshi ukusheshe emaphethelweni intabamlilo bayakhonza ilanga. Kodwa ngisho noma ukuya phezulu ntambama ngenhloso yokubuyisela ekhaya sekuhlwile, nibe nilindele kwalibaleka. Crater Intaba sifana Mars landscape. wonke Ngaphezulu embozwe amnyama itshe doti. Isimo sezulu esiteshini nama-altare engcwele umphelelisi isithombe eziyinqaba.
Mount Fuji e Japan: ehlathini lokuzibulala
Hhayi ngaphansi ethandwa futhi Dzyukay. Ngo Japanese, kusho "olwandle izihlahla". Phakathi kuqhuma lokugcina lava akazange uthinta, mayelana 35 Amakhilomitha elincane sikwele, ucezu ihlathi ngesikhathi kwentaba. Kusukela izihlahla etshalwa ukuze akha itende Friend eyenziwe boxwood notshani imiqhele. Kuthiwa ekuqaleni kwaholela emindenini ehlwempu kuleli hlathi asebekhulile nabantwana, abangakwazanga ukondla. Futhi ngokwenkolelo Japanese, imiphefumulo efile ahlale ekufeni okubuhlungu kuleli zwe, ukuziphindiselela uyaphila. Futhi ehlathini kweNtaba Fuji waba nendawo uhambo oluya endaweni ngoba abantu ukuzibulala ngokomqondo. abathandi Kunqatshiwe, abantu abalahlekelwe injongo yokuphila, washisa umsebenzi ngaphandle kohlobo ukwandisa ehhovisi plankton - konke umhlambi Dzyukay. Inombolo izidumbu ububanzi kuphela kusuka 70 eyikhulu namashumi ngonyaka. Zukang singcono kakhulu kuphela ngenani eliphakeme lokuzibulala Golden Gate Bridge (San Francisco).
Ukunqoba Park Poklonnaya Hill. Moscow Victory Park. Poklonnaya Gora: kanjani lapho?
Kokudlala zoo e Minsk: ikheli, Amahora okuvula, ukubuyekezwa
Kungani sidinga ukuhlakanipha amazinyo, ikakhulukazi isakhiwo
Indlela ukubhala izinombolo zesiRoma e "uLizwi"
Indlela yokwenza isixhumanisi okungukuthi isixhumanisi, isixhumanisi, inkomba yangaphakathi